आन्दोलन जारी छ! - Himalkhabar.com
ब्लगमंगलबार, कार्तिक १०, २०७२
नहुनु मामाभन्दा कानो मामा ठीक भन्दै दीपावली गर्न ठम्ठमिएकाहरूलाई ‘बलेक आउट’ घोषणाले बे्रक लगाउन खोज्दा कसैले सोध्यो, “संविधानमा के खोट देखियो, जनाव?”
“उसो’भे खोट के हो, बताऊ।”
न आगे सोचियो, न त मुन्डी घुमाएर पिछे हेरियो, फटाकसँग संविधान बहिष्कार गरियो। सवाल पुछ्न आसान भए’नि जवाफ दिनुपर्दा गानो जान्छ। ‘इधर कुवा, उधर खाई’ वाला सवाल धाएँ–धाएँ सोधेर कक्रक्क बैठाउन खोज्नु मधेश विरोधी खडयन्त्र हो।
एउटा बिन्दुमा पुगेपछि पल्टा खाएर बिचरा कथा रुम्जाटारतिर ढल्किन नसक्ला, तर राजनीतिको खेलोमा जुनसुकै घडीमा १८० डिग्रीको ‘ट्वीस्ट’ आउन सक्ने हुँदा बबाल रमाइलो हुन्छ। तर, यो मजा हेर्नेलाई हो।
बाह्रमासे अभिनेता बन्दाकोे व्यथा भुक्तभोगीहरू नै जान्दछन्। जसका विरुद्ध आन्दोलन उराल्न पचास लखिया अफर निकालेर ४६ जना नागरिकलाई मृत्युमा झोसियो, उसैलाई भोट खसाल्न धाइफाल दिएकोमा खिसियाउनु पर्दैन। हामी त निमित्त मात्र हौं, प्रभुको इशारामा चल्ने!
संविधान स्वीकार्ने कुरा पनि थोडी ‘अटोमेटिक’ हुन्छ? थोत्रो एचएमटी घडीलाई झैं चाबी घुमाएर कसैले दम भरिलिए अलग बात हो। नत्र, शास्त्रले जेसुकै कहि लियोस्, हामीले अन्तरिम संविधान अन्तर्गत संसद्मा भोट खसालेको तर्कलाई कसैले खारिज कर्न सक्तैन।
हाफिदै आएर खसालेको भोट ‘गेल भैंस पानीमें’ नभइद्या’भे मन्त्री पदको शपथ चाहिं कुन संविधान मातहत ग्रहण करिलिनुहुन्थ्यो भन्दै पुछ्न सक्नुहोला, लेकिन उपरवालाले त्यसरी छप्पर फाडेको भए नयाँ संविधानलाई नै दिलैदिलमा अन्तरिम मान्न सकिन्थ्यो।
फेरि यो कुन लफडा हो भन्दै तपाईं औंधे मुँह गिर्नुहोला, तर दुई महीनादेखि मधेशमा हामी करायो, सरकारको भाग चाहिं दुसराले उडायो। दिल बडा भ्वौंभ्वौं गरिरहेको छ, हाम्रो। आँख मुँदेर प्रभुजीलाई भरोसा गर्दा यसपालि धोवीको कुत्ता भइयो!
प्रभु दाहिना रहुन्जेल काठमाडौंको हुक्कापानी बन्द गर्छु भन्दै बेस्कन खोकियो पनि। जन्डुहरूले ‘टंगडी देख्दै चाल पाइयो’ भनी हियाउँदा पनि बत्तिसी देखाएर निर्लज्जम् शरणम् गच्छामी भइयो। अहिले के लाग्छ कि प्रभुजीले करवट बदल्नुभयो। अनेक पापड बेलेर मन्दा भए पनि धन्दा चलाइएकै थियो, तर यसपालि बडा खराब भई गयो, फँसियो।
जीवनमा जानेकै दुई कर्म हुन्– झण्डावाल गाडीमा हुँइकिनु र त्यो सयलबाट विमुख हुनासाथ डन्डा बोकेर मधेश खोस्रनु। त्यसैले, सत्ता नमिलुन्जेल देश र जनताको पत्ता काट्ने काम चालु राखेगें। सत्ताको गलियारामा छिराउने कुनै पनि चुनाउमा भोट खसाल्न छाडिन्न, संविधान पनि स्वीकारिन्न। हाम्रो आन्दोलन जारी छ!